မိတ္ထီလာမြို့အကြမ်းဖက်မှုနောက်ဆက်တွဲသတင်းများ၊ ဗလီ(၅)လုံးနှင့်မင်္ဂလာဇေယျုံဟာဖိဇ်ကျောင်းမှာ မီးရှို့ခံရ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မိတ္ထီလာမြို့အကြမ်းဖက်မှုနောက်ဆက်တွဲသတင်းများ၊ ဗလီ(၅)လုံးနှင့်မင်္ဂလာဇေယျုံဟာဖိဇ်ကျောင်းမှာ မီးရှို့ခံရ …
နံနက် ၀၀း ၂၀
မတ်လ ၂၁။ မိတ္ထီလာ
ဟိန်းအောင်ည ၉း၀၀ နာရီခန့်က ပုဒ်မ ၁၄၄ အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးသည့် နောက်တွင်လည်းမိတ္ထီလာမြို့သည် ငြိမ်သက်မှုမရှိ သေးဘဲ အကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသည်။မွတ်စလင်မ် မိသားစုများသည် မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်များကို စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးလျက်ရှိပြီး၊ အသက်အန္တရာယ်ကြုံနေကြရသည်။ ညသန်းခေါင် အချိန် တွင် မင်္ဂလာဇေယျုံဟာဖိဇ်ကျောင်းမှာ မီးရှို့ခံလိုက် ရပြီဖြစ်သည်။
မြို့ခံလူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရမြို့ဦးဗလီကိုလည်း ဓာတ်ဆီပုလင်းများဖြင့် ပစ်ပေါက်၍ မီးရှို့နေသည်ကိုေ တွ့မြင်ရကြောင်း သိရသည်။ မိတ္ထီလာမြို့ရှိ ပါကစ္စတန်ဗလီ အပါအ၀င် ဗလီ ၅ လုံးမှာ ဖျက်ဆီးခံလိုက် ရပြီဖြစ်ကြောင်း myanmarmuslim.net သတင်းထောက်မှ သတင်းပေးပို့ပါသည်။
This entry was posted on March 21, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Updated : မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍	မိထ္ထီလာမြို့ ရွေဆိုင်တွင်ရွေရောင်းစဉ် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှတဆင့် အုပ်စုဖွဲ့ ဖျက်ဆီးမှုများအားရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ …. →